Umhla My Pet » Indlela Planets ulaziyo Your Love Bya
ukubuyekezwa: Mar. 30 2020 | 3 min ukufunda
ngeenkwenkwezi, kukho into ekuthiwa itshati natal. Yinto Ngokusisiseko okhawulezayo yendawo ngqo kwi ezulu zonke iiplanethi ezinye iziqu ezi ngalo mzuzu lokuzalwa kwakho ukusuka kwindawo owazalwa. Loo nto ifana imephu, iyabala ngaphandle ubuntu bakho uze ubonise ukuba ufuna / imfuneko kwiinkalo ezahlukahlukeneyo zobomi bakho. Wonke umntu uyazi ukuba Venus yiplanethi uthando, kwaye umqondiso yena va ibekwe ukuzalwa anokunikezela siqonde ukuba ufuna eluthandweni. Uthini Venus wakho ndithi ngawe? (Ukuba ufuna ukufumana umqondiso wakho Venus, Cofa apha).
Venus in Aries: Kufuneka umntu ngubani na onokumelana nenzala, okanye uhambisa ngayo ukutya. Kufuneka nokuthanda yakho, uze ube nomdla ngobomi. Kuthabatheka amasoka ezininzi, kodwa wena hamba ngawo ngokukhawuleza ukuba akuyi swi ngento ofuna. Kufuneka ukufumana elidlulileyo imfuneko olunzulu ukuba mayisoloko ukuba imvakalelo kraca-olutsha.
Venus in Aquarius: Kufuneka umntu oluzinzileyo kunye noxanduva. Ukuba sele zasendle kwaye zingathembeki, ukuba usebenzisa ezinye indlela. Ongathanda umntu obunye wena encinane izinto ezinzulu ebomini, kwaye umntu enazo indalo yakho nkanuko. Ukuba uthathe ixesha lakho xa ukhetha iqabane, kwaye kufuna ukuzibophelela iyonke. Wati ngokuba isimnini kakhulu okanye unomona.
Venus in Gemini: Kufuneka nokukhuthazeka ngokwasengqondweni ngaphezu kwayo yonke enye into. Ukuba awukwazi ukuncokola kakuhle nomntu, uya kubhadula. Kufuneka umntu umdla, lohlobo yengqondo, kodwa lowo ngaphezulu nisekelwe kunawe ukuze bakwazi uzole kwaye buhlanti ukuba. Ukuba aye umntu ongaphantsi ngokwakho, okanye eziphethe okomntwana kunabo.
Venus kwi Cancer: Kufuneka uxhulumaniso ngokweemvakalelo nomntu ngaphezu kwayo yonke enye into. Ufuna neqabane ngubani wokuvulela ngokwasemoyeni, ukuxhasa nokukhuthaza ukuba, kodwa ndiya kukutyhalele ngaphandle ongaqhelananga. Ubudlelwane Ungafumana buthuntu, ukuba ngaba awuzithathi ezinye amathuba kunye neqabane lakho ukuze yonke rhoqo. Babukele utyekelo ukuba ube ngumzali kubudlelwane.
Venus e Leo: Kufuneka kuba inkwenkwezi kubudlelwane, ngoko ufuna neqabane ngubani na oya kuninika ingqalelo kwaye kubulela ufuna. Umntu unokuba lokuzingca maxa wambi luthando, kodwa ezifudumeleyo ndiyazingca kwakunye, kwaye Akumangalisi abanyanisekileyo. Wena Ndingathanda uthando kuba into yakho inoveli romance ozithandayo okanye ifilim, kwaye uthando kakhulu.
Venus in Virgo: Kufuneka umntu kuluncedo yaye linoxanduva, kwaye uza kukuvumela ukuba uthathe ixesha lakho. Akufuni ukuba bakuphembelele xa ukhetha omnye umntu ukuba abe, kwaye ufuna ukuqinisekisa ukuba ilungelo lokuqala. Unako baneentloni kancinane eluthandweni, kwaye kufuneka ukuba benze ukufuduka kuqala. Kufuneka wena neqabane ngubani kusithuthuzela okukruqulayo xa Uzikhathaza ngolwalamano.
Venus in Libra: Kufuneka umntu kuthatha nzulu ukuzibophelela, kuba Uqinisekile ukwenza. Ngaxeshanye, kufuneka umlinganiselo othile wendawo ubudlelwane ukuze akhule, kwaye ufuna umntu uyaqonda ukuba ubudlelwane Usenokukwazi ukufumana ngcono. Uyavuya romance kunye chivalry, kwaye ufuna lokuphathwa ngentlonipho nanjengoko elilinganayo.
Venus in Virgo: Kufuneka umntu Unehlombe kodwa ingaphatha uxinzelelo lwakho, kuba nokuba yiyo ngamaxesha luthando. Unako siyilibale okanye ukubambelela iqabane lakho, enze ukulawula okanye kakubi ngayo, ngoko ke kubalulekile ukuba ukusebenza ngaphambi kokuba nomntu okanye uya ukutyhala bemke. Uyafana otsaleleke enamandla babonakala bomelele.
Venus in Sagittarius: Kufuneka umntu ukuba wokufuna, ngqindilili, kwaye kuhleka nawe. Awuzithathi kakhulu nzulu uthando, ngoko ke kufuneka umntu into eluncedo ngakumbi uthando, yaye akayi kuniyekela Andiphambukanga kakhulu. Kufuneka udibaniso ngokwasemzimbeni nomntu, kwaye kufuneka sikhumbule ukuba omnye ngokweemvakalelo kubalulekile kakhulu. Esi sithuba onokubonisa isidanga obungunaphakade / bachelorette.
Venus in Capricorn: Kufuneka umntu oqolileyo, noxanduva, kunye nentwana bemveli kunye nothando. Uyafana otsaleleke abantu abaphumeleleyo, ababefumene okanye asendleleni eya ekuphumezeni izinga eliphezulu ebomini, kwaye uye namaqabane abadala. Ekubeni wena zesiNtu, ungasebenzisa umntu oya ezinye bungangobo ngoko ubudlelwane ayilufumani iphelelwe lixesha.
Venus in Aquarius: Kufuneka umntu ukuba umntu yabo, nobuntu eyodwa, kwaye idibanisa ukuba nolwazi. Uthanda ukuba ngabahlobo nomnye umntu wokuqala, kwaye uzive ukuba ubuhlobo na isiseko ogqibeleleyo uthando. Le ngxaki, unokuba ixesha kunzima ukuya ngaphaya ubuhlobo, ngoko ke kufuneka umntu oya kuvula ukuba phezulu ngokweemvakalelo uzise angathabatheki.
Venus in Virgo: Kufuneka umntu Uyaziqonda iintswelo neemvakalelo, uya kukukhusela ukuba xa uziva ubuthathaka, kwaye alisayi kuwathathela kukuqatha. Ukuba Uyakuyenza loo nto umntu omthandayo, kwaye jikwa umqondo lula ngenxa yaloo. Ukuba enjalo uthando entliziyweni, ufuna umntu luncedo nisekelwe. Uyafana bathanda iindidi zobugcisa.
Tips ezintlanu On Indlela Usuku Blind
Tips Top ukuba Kiss Great eliziva Just Perfect
Ngaba lwakho Online Iiprofayili Social waphulwe ndaneni?